Izici zeBhizinisi le-Apple Mountain Lion
Kungani Ikhompyutha Yakho Elandelayo Yebhizinisi Kufanele Ibe Yi-Mac
NgoMgqibelo, Agasti 25, 2012 NgeSonto, Agasti 26, 2012 Douglas Karr
Bengingumfana fan kusukela umngani wami uBill engithengele i-Apple TV. Ngaphambi kokuthi wazi, benginekhaya eligcwele ama-Mac futhi ibhizinisi lami manje seliwo wonke ama-Mac. Ukuqhamuka emhlabeni we-PC, kube nezinselelo ezithile. Izibonelo ezimbalwa ezingaphezulu kwekhanda lami… awekho ama-macros ku-Office, ayikho i-Microsoft Access. Lolo uhlu oluncane kakhulu, noma kunjalo. Izinzuzo ze-Mac ziphenduka zikhulu kakhulu kunezinkinga zokuba yi-Mac emhlabeni we-PC.
Nge-hardware yakamuva nesoftware, i-Apple ibilokhu ishayela ekhaya ezinye zezinto ezinhle kakhulu ezinhle kunoma yiliphi ibhizinisi.
Iyokuqala I-AirPlay. Nge- Apple TV ngo- $ 99 nanoma iyiphi i-TV ebanzi, ihhovisi lakho manje linendawo yokwethula ngokukhululekile okukulo laptop yakho. Ngohlobo lwakamuva lwe-OSX, iMountain Lion ingeza inkinobho ye-AirPlay kubha yemenyu. Chofoza bese uboniswa isikrini sakho. Ungadlala ngisho nevidiyo nomsindo!
I-AirDrop Olandelayo… ingxenye Mountain Lion sika Ukwabelana okwakhelwe ngaphakathi. Iklayenti lethu, Tinderbox, weza ukuhlela amanye amafayela. Esikhundleni sokuthumela i-imeyili noma ukufaka kufolda eyabelwe ifu… I-AirDrop imane yamvumela ukuthi athumele ifayili ngqo kwi-Mac yami. I-AirDrop ibala wonke ama-Macs endaweni yakho futhi ikuvumela ukuthi uthumele futhi wamukele amafayela (ngemvume). Isici Awesome!
Isikhathi Machine uhlelo lokusekelayo olulula kunazo zonke. Faka i- Isikhathi Capsule kunethiwekhi yakho noma yabelana ngedrayivu kwenye indawo… futhi uthola indawo yokusekelayo ye-Time Machine esebenza ngokulambisa ukwenza i-Mac yakho.
I-Apple ibilokhu inamathuluzi amahle wokukusiza ukuthi uthuthe usuka ku-Mac eyodwa uye kolandelayo, kodwa Umsizi Wokufuduka ilula futhi iyamangalisa! Ngisanda kuthenga iMacBook Pro entsha futhi ngidinga ukuletha izinhlelo zami zokusebenza namafayela kuyo. Qalisa inkinobho ye-Option ucindezelwe futhi iwizard elula ikubuza ukuthi ngabe ufuna ukubuyisa kusuka ku-Time Machine, faka kabusha i-Mountain Lion entsha, noma ukopishe amafayela nezinhlelo zakho zokusebenza kwenye i-Mac. Kungakapheli nehora ngase ngivukile ngibaleka!
Khumbula ukuthi azikho kulezi zici zenethiwekhi ezidinga umphathi wenethiwekhi nokulungiswa okunzima. Njengakho konke okwenziwa yi-Apple, ziyasebenza nje.
Ukufihla Ukuzikhipha Kuhlu Akulona Isu Lokugcinwa
Aug 27, 2012 ngo-4: 55 PM
Futhi uma "uhambe Mac", awukwazi ukubuyela emuva! 😉
UPatrick Chen eMarketo
Aug 29, 2012 ku-11: 34 AM
I-Excel… isizathu esisodwa sokuthi noma isiphi isazi sokukhangisa kumele sisebenzise i-PC, hhayi iMac.
Sep 13, 2012 ngo-4: 59 PM
I-Excel ibonakala ihamba kancane kuma-Mac amadala, kepha iyasha kwi-MacBook Pro yami entsha. Okubi ukuthi i-VBA neMacros azisebenzi ku-Mac (ngaphandle kokuthi uyisebenzise ku-Windows… okungenzeka, kepha yehlula inhloso yokuba ne-Mac!).
Sep 2, 2012 ku-5: 14 AM
I-Excel isebenza ku-Mac kanjalo neNumeri (inguqulo ye-Mac ye-excel). Izinombolo ze-WIth ungathumela futhi uhlele ama-spreadsheet amahle futhi uzigcine ngefomethi ye-excel. Kulula!
Sep 2, 2012 ngo-5: 19 PM
True @ twitter-15194414: disqus, kodwa ngeshwa inguqulo ye-Excel kwi-Mac ayifaki i-VBA (Visual Basic for Applications) noma iMacros… lelo yigebe elikhulu ekusebenzeni!
Sep 13, 2012 ku-5: 01 AM
Uhlelo lwesimanje, oluthandwa kakhulu lwamakhompiyutha lunohlelo lwespredishithi oluhambisana ne-Excel olutholakalayo. Umhlaba omangele uba nomkhosi wezinsuku ezintathu wokugubha.
Kwezinye izindaba, isibhakabhaka siluhlaza okwesibhakabhaka, amanzi amanzi.
Bengine-Excel load / edit / save spreadsheet ehambisanayo ku-90s-spec PALM PILOT wami naphakathi ne-noughties PHONE-based SIMONI ngenxa yesihawu.
Sep 13, 2012 ku-4: 56 AM
Ehhh… ake sithi angiqiniseki kangako lapha.
I-Airdrop izwakala isihogo esifana nezici zokwabelana ngamafayela ezakhelwe iMicrosoft Windows iminyaka engaphezudlwana kwamashumi amabili manje, nokuthi sihlala siyisebenzisa ehhovisini lethu le-Windows XP / 7. Nginenkinga yokuyibona njenge-USP ye-Mac. Futhi noma ngabe lokho bekungekho, kungaba lula ukwenza into efanayo nge-10 $ bluetooth dongle exhunywe ethekwini le-USB kwideskithophu, nezici ze-BT ezakhelwe (nezingavinjelwe) ngokuyisisekelo kunoma iyiphi i-laptop ye-PC (impela, kuyinto engiyisebenzise kakhulu ukuthumela amafayela ngibuye ngibuyele ngivela ocingweni obekune-bluetooth kodwa kungenakuxhuma okuxakekile kwe-USB, ngawo womabili ama-laptops nama-dongle afakwe ama-dongle)… noma kulula kakhulu namanje, ukuthwebula i-USB nge-sub- $ 10 USB imemori stick noma ikhadi le-SD.
I-Airplay… KULUNGILE, akukubi, kepha usadinga umphathi ukuthi abe ne-Apple TV futhi ayixhume. Cishe akunzima kakhulu ukwenza okufanayo nganoma iyiphi i-PC / i-laptop endala engenamsoco exhunywe kokufakwayo kwe-VGA ye-HDTV kanye nesici se-Remote Desktop Sharing (esakhelwe naku-Windows kusukela okungenani ngo-2K, uma kungenjalo ngo-9x)… nasendaweni yehhovisi engingakwenza Ngibona kunama-HDTV amaningi kakhulu ngalokho angenayo i-PC yebhizinisi enesizotha (noma iMac ezinikele) exhunywe, noma umshini weWindows oshumekiwe (esimweni samabhodi ezimpawu zedijithali). Kukhona futhi amadivayisi akhanyayo okukhanyisa okungenazintambo atholakalayo ama-PC - empeleni, noma iyiphi idivayisi ebeka i-VGA, RGB noma i-YCbCr hi-def element signal (futhi kwezinye izimo i-HDMI / DVI, noma inhlanganisela) ngaphandle kohlobo, uhlelo lokusebenza, abashayeli noma isoftware - hhayi imali eningi kakhulu. Ama-TV anamuhla ama-Smart cishe angenza okuthile ngaleyo migqa nge-ethernet (ngakho-ke i-wifi) nayo, kodwa okwamanje angizukubeka mali kuyo…
Isikhathi Capsule… Angifuni ukumba kuwo kanzima, kepha kuhlala kuzwakala ngokweqile kimi. Ngithengile amadiski angaphandle ashibhile angaphandle ngaphambi kokuba eze nesoftware yokuvikela ngokuzenzakalela efanayo, futhi ngiyabheja uma ngithenga idivayisi ejwayelekile ye-NAS nayo ingenza okufanayo. Izinhlobo zanamuhla ezixhumene namawindi zingasethelwa kungobo yomlando ngokuzenzakalela izinhlobo zangaphambilini zamafayela kudrayivu yeseva eyisipele yalezo zikhathi ze- “oops” ngokufana nje nalokho abakwaziyo nge-TC (empeleni… ungawakhipha amafayela awodwa kuwo? Isikhathi sokugcina Ngibe nokuhlangenwe nakho okuqondile obekufanele ubuyisele emuva yonke ikhompyutha…) - kodwa futhi, ngisebenzise leyo ndawo kumshini wami wendawo yokusebenza ngemuva kwephutha elingenandaba, futhi ibingenamthungo ngempela… chofoza kwesokudla kufolda okukhulunywa ngayo, hamba kuthebhu “yangaphambilini”, bese uxhuma kuze kutholakale eyodwa equkethe ifayela elilahlekile… bese ukopisha lelo fayela enguqulweni yamanje yefolda.
Umsizi Wokufuduka - KULUNGILE, unephuzu lapho. Ngingathanda lokho kumakhompyutha ami (njengoba enjalo, empeleni akubona lukhulu lukhulu lolo ukuxhuma idrayivu yangaphandle, ukukopisha inani elincane lamadokhumenti namanye amafayela wedatha ahlala kudiski yangaphakathi kuye okusha umshini (noma ngisho nje ukuwabeka esitokisini esincane sama-DVD), bese ufaka kabusha izinhlelo ezimbalwa engizisebenzisayo ngaphandle kwenani elikhulu ebelifakiwe eminyakeni edlule bese ngikhohliwe kancane kancane ngayo). Kepha lokho kuzosebenza kakhulu kumsebenzisi wasekhaya noma kothile osehhovisi elincane futhi elingahlelekile kahle kunanoma yiluphi uhlobo lwebhizinisi elisezingeni elifanele ngenethiwekhi yalo kanye namaseva, lapho noma iyiphi i-sysadmin ebiza usawoti wayo izosebenza ngezithombe eziqhutshwa ngokushayela izithombe noma kunjalo.
Ngabe kuyinzuzo yini ukuthi lokhu kususe umphathi wenethiwekhi nanoma yiluphi uhlobo lokuziphatha okuhlelekile noma inhlangano yenethiwekhi yakho yehhovisi? Isiphithiphithi salolo hlobo siholela ekuthambekeni, ukungabi namandla okuthola izinhlekelele, ukungavikeleki nokuxakaniseka kwezicelo, ngaphandle kokufaka isandla ekukhiqizeni.
Sep 13, 2012 ngo-5: 01 PM
I-Airdrop yehluke kakhulu kunokwabelana ngefolda / kwefayela ku-PC. Lokhu akudingi nethiwekhi… enye nje iMac ebangeni elingenantambo. Kuhle impela! Noma kunini lapho ngenze ukwabiwa kwefayela nge-PC, bekufanele ngithole ukungena ngemvume komsebenzisi kunethiwekhi yenkampani futhi ngingeze eqenjini labo ngaphambi kokuthi ngibelane nganoma yini.
Mar 13, 2013 ku-12: 29 AM
ukulahlekelwa kwakho iphuzu lephuzu. Zimane nje zisebenze, hhayi ama-setups, iphaneli yokulawula (ngaphandle kwezimvume). Bengingumfana we-pc iminyaka engama-20 futhi ngemuva kokuba ngingu-sys admin emsebenzini bese ngibuya ekhaya ngizoba yi-sys admin ye-HW ekhaya, ngakhathala. Wachitha imali kuma-macs futhi akazange abuke emuva. Kungasekho okuluhlaza okwesibhakabhaka, okupinki, okumhlophe noma okumnyama. Ama-Mac avele asebenze w / o noma yiliphi ikhono lokuphatha elidingekayo. Emsebenzini sathola ithuba loku-oda iMac noma iPC. Futhi ngihambile ne-mac, ngoba ngingahlala ngisebenzisa windows ngaphakathi kwe-VMware. Ama-PC ayahamba ngoba i-HW jsut imane idinga ukusebenza i-w / o ine-BS ku-CS.
Sep 24, 2012 ku-3: 58 AM
Yebo, amawindi asebenza kwi-Mac agijima ngokushesha, abhema futhi enze okufunayo kangcono kune-PC. Ngakho-ke unalokho engqondweni nokuthi yini iMac engenza kangcono kune-PC, kungani ungabi nayo yomibili imihlaba kumshini ongcono. Ekugcineni uzothola ukuthi usebenzise ingxenye ye-PC kancane kancane.
Ngo-Apr 25, i-2013 ku-12: 17 AM
I-Airplay ayiyona into enkulu futhi. Ithebhulethi yami ye-PC eneminyaka emihlanu ingasakaza wonke amafayela wami wesikhungo seMedia iye ku-Sony Network Player yami eneminyaka emi-5 ubudala. Ekuseni.
May 12, 2013 ku-12: 22 AM
May 23, 2013 ku-1: 37 AM
Lokhu kubukeka njengomunye 'umfana womlandeli' omkhulu ku-Apple. Kepha kunezinto ezimbalwa ezingalungile, ngokwesibonelo, iMac ifushane ngeMacintosh, kepha akusekho ikhompyutha yeMacintosh. I- “Mac” iyi-PC, yihadiwe efanayo esimweni esicwebezelayo, futhi ibiza imali ephindwe kane. Ngicabanga ukuthi umehluko OZAMA ukuwukhombisa ukuthi iMacOS (okungukuthi, i-Operating System) ingcono kuneWindows yokusetshenziswa kwebhizinisi, kepha wehlulekile ukukhomba noma yiziphi izizathu zangempela zokuthi kungani iMacOS ingcono kumsebenzisi webhizinisi.
1. I-AirPlay idinga ukuthi UTHENGE i-Hardware eyengeziwe, futhi izinkampani eziningi azinakho ukusethwa kwe-Apple TV, okusho ukuthi uma uthola i-AirBook noma okuthize lapho uzokwazi khona ukwabelana ngokwenzayo kunoma yisiphi isibuko esikhulu lapho usuka kude ne-TV yakho ezinikele. Amaprojektha amaningi nawo ahluleka ukukhombisa isikrini sakho kahle bese ewela esikrinini esingu-1024 × 768 (okungcono kakhulu, imvamisa kungama-800 × 600 noma kunjalo), lokhu kunikeza ithuba lokubuka elibi, futhi kuyinto ejwayelekile kunoma ngubani owabelana ngedeskithophu yakhe nabanye - angikaze uhlangabezana nanoma yiliphi ibhizinisi eline-Apple TV okwamanje.
Ukube ubuzokwabelana ngewindows desktop yakho, lawo maprojektha afanayo azokuvumela ukuthi usebenzise i-1280, 1440, 1600 noma i-1920 ngaphandle kwenkinga - ngakho-ke kungani i-hardware efanayo yehluleka ukwenza lokhu, ngoba usebenzisa iMacOS? Ngicabanga ukuthi umbuzo uyaziphendula.
2. I-AirDrop ngokuyisisekelo iyefana nokutholwa okuzenzakalelayo ngaphakathi kweWindows obekukhona kusukela kumawindi 2000. Noma yimuphi umshini kunethiwekhi owabelana nganoma yini obala uzovela endaweni yakho ye- "My Network Places", awudingi ukwenza noma yini ukuthola lokhu, kuyasebenza nje! Uma ufuna ukuthumela okuthile kothile, vele uhudule bese uphonsa kuleyo folda, kepha futhi ungabhekabheka amafayela abo ngasikhathi sinye.
Uma bekhiye izimvume (abaphathi abaningi bazokukhubaza lokhu esithombeni sabo), lapho-ke bangakunika izimvume zokubhala kufolda yabo yemibhalo yomphakathi ngemizuzwana embalwa.
3. I-Time Machine izwakala njengokuqhekeka kwesipele esizenzakalelayo esisebenza isikhathi eside amawindi (kusukela ngo-win 2000). Kepha i-windows one izokwenza isipele kuphela amafayela wohlelo, uma ufuna ukwenza isipele amafayela wakho womuntu siqu, uzoba nendlela yokwenza lokhu nge-software ye-windows server umsebenzisi angadingi nokuthi azi ngayo - kuzokwenzeka nje .
Uma ufuna ukwenza isipele sedatha yomuntu siqu noma kunjalo, kulula-ke ukukwenza lokhu emafasiteleni njengoba ukukwenza kwi-MacOS, mane unamathisele idrayivu emshinini wakho, noma i-NAS kunethiwekhi yakho, futhi bazofika isoftware efanele ukwenza ukuthi izipele zakho zisebenze… Kukhona namakhulu amasu we-Cloud Backup ngaphandle lapho ashibhile futhi asebenziseka kalula.
4. Usizo Lokufuduka Ebhizinisini kuwukuchitha isikhathi, ngoba i- "Admin" yakho izofaka isithombe emshinini, futhi wonke amafayela wakho ahlobene nomsebenzi / nomsebenzi azobe esevele enziwe isipele kwenye indawo… Futhi azotholakala kumsebenzisi wakho noma ngabe ungena kumuphi umshini. IWindows ibisebenzisa abasebenzisi abazulazulayo kusukela windows 95, egcina ngokuzenzakalela idatha kunethiwekhi yakho. Amathuluzi anjengesikhwama esincane esetshenziswa ukukuvumela ukuthi ugcine amafayela ngokuvumelanisa phakathi kwezindlela ezingaxhunyiwe ku-inthanethi neziku-inthanethi futhi, futhi lokho kwakutholakala ku-Windows 95!
May 23, 2013 ku-10: 20 AM
Kubonakala njengomfana “ongeyena umlandeli” ongazisebenzisanga lezi zici, @ facebook-100000630323259: disqus. 🙂
1. Ngithe idinga ama- $ 99, kepha ulivezile iphuzu lami. Kungani ibhizinisi lichithe izinkulungwane kwiphrojektha esikhundleni sokumane lifake i-HDTV enhle ne-AppleTV? Kungakho ngiyincoma.
2. Cha, ngesaba ukuthi akukho lapho kuseduze khona. Akunasidingo sokusetha izimvume, ube kwinethiwekhi efanayo yeWindows, njll.
3. Futhi, uma usebenzise isoftware, uzobona umehluko.
4. Ngisebenze inqwaba yamabhizinisi futhi kuphela umbhangqwana owaba nokuvumelanisa okufanele futhi wabelana ngamafolda wenethiwekhi okhuluma ngawo. Futhi, lokhu kwenza iMac yami entsha ibe yikhophi ye-EXACT, ngenkathi i-hardware ithuthukisiwe ngaphansi kwayo.
Angikhulumi njengomfana ongenalo ulwazi kukho kokubili. Ngine-monster Windows system ekhaya ene-XBox 360 yokuzijabulisa. Okuhlangenwe nakho kweWindows akufani. Izici zeMac ne-OSX zimane zisebenze kangcono, zisheshe, futhi zibe lula kuneWindows. Ngingumsebenzisi weWindows isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi. Ngiyesaba ukuthi angisoze ngabuyela emuva. Abangani bami abebengigxeka ngokuba "ngumfana ongumlandeli" bathole okufanayo.